Spray pfuti imhando yemidziyo iyo inoshandisa kukurumidza kuburitswa kwemvura kana yakamanikidzwa mweya sesimba. Inogona kushandiswa mukuvaka kupfira uye chinhu chakakosha muchishongedzo. Inogona kushandiswa mundima yekupuruzira mota, senge yekumesa mota kugadzirisa, mota yemagetsi OEM, kupuruzira mota yechitima, nezvimwewo inogona kushandiswa pakupfira simbi, kupurasitiki kupurasitiki, huwandu hwehuni zvigadzirwa, kupurasita maindasitiri, nano zvinhu zvekutsvaira, art Kupfira nemimwe minda.
Iyo pfuti yekupfira yakagadzirwa pamwe nekusimudzira indasitiri yemotokari uye indasitiri inodziya. Mumakore achangopfuura, nekuvandudzwa kwedzimotokari dzepasi rose uye indasitiri yekugadzira, indasitiri yepfuti iri kuvandawo, zvikamu zvechigadzirwa zviri kuwedzera, nzvimbo dzekushandisa dziri kuwedzera, uye hunhu hunotevera hunounzwa:
North America, Europe neAsia ndiyo huru misika yevatengi. Iko kudikanwa kwekuda kwekupfira pfuti kunonyanya kubva kuminda yemotokari, kuvaka, kugadzira zvigadzirwa zvehuni uye zvigadzirwa zveindasitiri. Mamiriro ekushandisa ane hukama hukuru nekusimudzira kwemusika wakadzika. Kubva mukuvandudza kwemusika wekudzika, zvinogona kuoneka kuti North America, Europe neAsia ndiyo misika mikuru yevatengi yeiyo airbrush yepasi, nekudikanwa kukuru kwekushandisa.
Asia ndiyo nzvimbo huru yekugovera. Nekuvandudzwa kwemuti wepfuti Musika muNorth America neEurope, zvishoma nezvishoma Asia yakave ndiyo nzvimbo huru yekupfira pfuti munyika pasi pehunyanzvi hwekuendesa maindasitiri. Pakati pavo, China yakabatsira kubva mukuvandudzwa kwehupfumi uye kukurumidza kuvandudza indasitiri yepfuti. Vagadziri vakuru vepasirese zvishoma nezvishoma vakagadzira mabhizinesi epamhepo-kana ekunze anowanikwa kune dzimwe nyika muChina kuti vaite basa rekugadzira zvigadzirwa uye kukurudzira kukurumidza kukurumidza kwekugovera.
Makwikwi pakati pemabhizinesi ari kuwedzera kutyisa. Kune zvimwe zvipinganidzo zvezvemari muindasitiri yepfuti. Parizvino, mhando huru dzekupfira pfuti munyika dzinosanganisira SATA yeGerman, Japan yeniste Iwata, yekuAmerican yekupedzisa mabepa ekupenda, American gurik, Swiss Jinma pendi, Germany Wagner, Japan xucannak mhando kirabhu, etc. Mumakore achangopfuura, neiyo Kuvandudzwa kwemaindasitiri epfuti epasi rose uye kufambira mberi kwehunyanzvi, mabhizinesi mazhinji ari kupinda muindastiri, izvo zvinoita kuti makwikwi emusika awedzere kutyisa.
Iko kugona kwehunyanzvi kuri kugara uchivandudza. Mumakore achangopfuura, zvichitungamirwa nemusika wekuda uye kusimudzira kwesainzi uye tekinoroji, kugona kwehunyanzvi hwekutsvaira pfuti indasitiri kuri kuvandudza, mhando dzezvigadzirwa zvekupfira pfuti zviri kuramba dzichiwedzera, kuita kwacho kuri kuramba kuchikwira, uye chikamu chemusika. yepfuti isina mweya yekupusha, otomatiki pfuti pfuti, kuchengetedza zvakatipoteredza pfuti uye zvimwe zvigadzirwa zviri kuwedzera.
Iyo airbrush chishandiso chine simba chekugadzira chinogona kumira chega sekutaura kwehunyanzvi kana kuiswa mune iripo rekusika re “mudziyo bhokisi” kuburitsa rakapfuma maratidziro emhando dzakasiyana siyana.
Parizvino, mune dzekunze maindasitiri akasimukira nyika iyo burrush mumotokari yemhando uye mhando yekugadzira-indasitiri kazhinji iri padanho repamberi, mabhizinesi makuru epasi rose anonyanya kuiswa muUSA neJapan. Zvichakadaro, makambani ekunze ane mamwe michina yepamusoro, yakasimba R & D kukwanisa, huwandu hwehunyanzvi huri munzvimbo inotungamira.
Kunyangwe kutengesa kwebrashibrashi kwakaunza mikana yakawanda, boka rekudzidza rinokurudzira vanyori vatsva vanongova nemari asi vasina hunyanzvi hwekushandisa uye kutsigira kwekutsika, usapinda muchimiro chebrashi nekukurumidza.
Nguva yekutumira: Dec-24-2019